Ndiyilungisa njani i-wardrobe kubantwana bam?
Iingcebiso zesigcino sokucwangcisa
Bandakanya abantwana xa behlambulula
Ukugcina i-oda kwisigqoko sesigcino sezingane kuyinselele. Iingubo zincinci, kodwa kukho ezininzi. Ngenxa yokuba abantwana bekhula ngokukhawuleza baze badinga izinto ezintsha. Ukongezelela, abantwana basadingeka bafunde ukuba kutheni ukucoca rhoqo kubalulekile kwaye kuqikelele. Kodwa ngeendlela ezifanelekileyo kunye noncedo lwabantwana, unako ukulawula ukugcina i-closet kakuhle.
Ngaphambi kokuba uqale ukudala umyalelo, kufuneka uqale ungenanto ikhabhobho ngokufanelekileyo.
Cocca ikhabethe kwi-nursery
Nantoni na engasayi kufunwa okanye ayikho into ayithandayo iyalahlwa. Kukho iindlela eziliqela apho ikhabhinethi inokulungiswa kakuhle kwaye ihlambuluke.
Umzekelo, nge-crane ye-3, uhlalutye zonke iingubo kwiingxowa ezibhalwe ngegama elithi "Gcina," "Uncedo," kwaye "Ulahle." Unokwenza isigqibo sokuba ufuna ukuthengisa, ukulahla, ukulahla okanye ukupha iingubo ezikhethiweyo kwiqoqo elidala.
Nangona le nkqubo idala ingxaki enkulu ekuqaleni, yenza kube lula ukulungelelanisa ngokuqulathe iziqulatho ze-wardrobe. Ungasebenzisa kwakhona ixesha lokusula ikhabhobho engenanto.
Isicwangciso esilungileyo sokuphepha isithintelo asiyikuvumela ukuba kwenzeke. Kakade oku kunzima kubantwana. Yingakho i-cupboard ifanele ibe yenzelwe ukuba inobungane nabantwana, ukuze yonke into ibe neendawo zayo eziqhelekileyo:
Hlela iimpahla ngeentlobo ezahlukeneyo kunye ne-store trousers kwipokothini enye, i-T-shirt kwenye.
Ngokomzekelo, sebenzisa ibhokisi eyahlukileyo ukugcina izicathulo, iipajama, iifowuni okanye izinto zokuhlamba. Ukwenza kube lula kuwe nakubantwana, ungabhalela.
Izinto zasebusika ezingenakudingeka ehlobo kunye nakwezinye izinto zingagcinwa kwiibhokisi ezivaliweyo okanye kwiikhabhinethi. Ngoko ba khuselwe nakwi-moth infestation.
Kwiingubo ezigqitywe kodwa azidingeki ukuba zihlanjwe, unokwenza isikhala esahlukileyo. Ngokomzekelo, ngendlela yesitulo, umzila wesitimela okanye iinkokhwe ezininzi kwicala lekhabhinethi okanye udongeni. Iingubo zinokuphinda ziguqulwe ngosuku olulandelayo okanye zibuyiselwe kwikhabhinethi.
Kwakhona kunconywa yikotya yokuhlamba kwindawo yokulala. Iingxenye ezingcolileyo azidibanisi.
Ingakumbi abantwana abancinane kufuneka bafunde indlela yokugcina umyalelo osebenza ngayo. Njengomzali, unako ukuxhasa inzala yakho. Abazali basoloko bewumzekelo, nangona xa bethetha. Ngoko ke kubalulekile ukuba abantwana baphile umyalelo othile osisiseko. Isiphumo kunye nemiyalezo ecacileyo ibaluleke kakhulu nakwixesha lesikolweni, ukwenzela ukuba abantwana bazi kakuhle ukuba benzani.
Ukuze amahlumela agcine umyalelo kwi-closet yabo ngexesha, kufuneka akwazi ukufikelela kumxholo. Izambatho ezifunekayo imihla ngemihla, akufanele ke zibe kwi-tray ephezulu. Ngama-hangers ngobukhulu bomntwana, abantwana banokusingatha ngcono. Kulula ukuba baxhome iingubo kunye neebhaki. Kukho neenkqubo zekhabhinethi ezilungiselelwe abantwana kunye nobukhulu bazo.
Emva kokuba umyalelo othile ukhona, kulula ukuba abantwana bawugcine. Ngenxa yokuba banokuzibandakanya kwiinkqubo zekhomishini. Ukugcina izinto ezihleliweyo yinkqubo eqhubekayo. Abantwana bakhula kwaye bathuthuke ngokukhawuleza, ngoko ke izambatho ezintsha zifuneka ngexesha elifutshane.
Ngako-ke kucetyiswa ukuba kusekwe imigaqo yokulungiswa, umzekelo ngosuku olusisigxina apho ikhabhinethi ihlambulukileyo. Ngaphandle koko, njengaye 5-S indlela Ucetyisa ukuhlehliswa kwezithombe zelizwe elifanelekileyo emva kokukhenkcela, ukuhlenga nokucoca ikhemitha. Abantwana banokuziqhelanisa oku, ukuba bazihlambulula.
Indima yootatomkhulu Imfundo yentsapho
Hamba abantwana, igumbi lihlambuluke! | imfundo
Xa abantwana bephula izinto | imfundo
Abantwana abanezipho eziphezulu | imfundo